Ujojo usami ngothi lwakhe : incazelo – Buza Noma Yini
Ujojo usami ngothi lwakhe : incazelo
1.25K views April 21, 2021 ulimi LwesiZulu
Ujojo usami ngothi lwakhe: incazelo
Ujojo wuhlobo oluthize lwenyoni encanyana enesisila eside esimnyama esifahlaze ngamabala amhlophe. Kuya ngokuthi le nyoni ngakini niyibiza kanjani, ujojo noma ujwejwe. Kuthiwa ujojo olumantwengu ngoba uma ihlezi isisila sayo siyahliphizeka sibe mantwenguntwengu sengathi yibheshu.
Le nyoni ivamise ukuhamba nezintaka emhlangeni nasemafusini, abanye bathi Ujobela igama layo. Kuyenzekake nokho uyithole izihambela yodwa le nyoni. Le nyoni inomkhuba wokuthi ihlale ocingweni noma othini inganyakazi. Uma wedlula uzoyishiya imile uhambe uze ubuye ilokhu ihlezi othini, ayibaleki iyakulinda uze usondele eduze andukuba ibaleke. Ujojo yinyoni enesibindi ngoba uma ibona umuntu eza ngakuyo engaphethe lutho ayibaleki. Lesi senzo sayo sokuhlala othini ingasuki yiso esaholela ekwakhekeni kwesaga esithi: “ujojo usami ngothi lwakhe”
Lesi saga sichaza umuntu osalokhu emile emazwini akhe awashilo, akaguquki kuwo kuhle kwayo le nyoni, ujojo olumantwengu. Kuyenzeka insizwa yeshela intombi bese intombi ingavumi ukuyigaxa ucu, nakusasa ibuye insizwa ithole ukuthi kusenjalo nje “ujojo usami ngothi” lwakhe okusho ukuthi le ntombi isamile emazwini ayo ewashilo ayikashintshi….